China Diamond glass saw ceramic, glass drill, glass holw saw, glass tapper, ceramic hole saw, marble hole saw ifektri abakhiqizi | Boda
Idayimane lengilazi le-ceramic saw, ingilazi yokubhoboza ingilazi, ingilazi ye-holw saw, i-glass tapper, i-ceramic hole saw, i-marble hole saw
IBOSENDA ingilazi hole saw / ingilazi imbobo yokuvula, ithokozela izinzuzo zokusebenza, ikhanda lokubhola ligcwele izinhlayiya zekhwalithi ephezulu zedayimane, umklamo womkhiqizo ulula, unekhanda elibukhali futhi eliqinile, futhi ukumelana nokugqokwa kwe-skid. Inazo zonke izici zesilazi esihle sokubhola / i-ceramic drill / ceramic hole saw.
Ikhanda lokubhola lenziwe nge-emery esezingeni eliphakeme futhi ejiyile, ehlala isikhathi eside kunaleyo evulwa izimbobo ezifanayo. Umklamo okhethekile wokuvula nokwelashwa kwe-nickel plating ebusweni kunganciphisa kakhulu ukumelana lapho kubhola futhi kwenze indawo yokubamba nokumba isebenze kahle. Ngomklamo owenziwe kahle we-chip removal groove, i-chip ne-slag ingakhishwa emgodini wokususa i-chip ngokushelela ngemuva kokuvula, futhi ingaqeda ukushisa ngesikhathi sokusebenza.
Isibambo esiyindilinga silungele ugesi wesandla kagesi kanye ne-vise. Imininingwane yomkhiqizo iphelele futhi ihlangabezana nezidingo zokuvuleka okuhlukahlukene
Ingilazi yomgodi we-Glass ilungele ukuvula izimbobo ezintweni eziqhekekile nezilukhuni ezifana nezibuko, amathayili e-ceramic, izitini eziqinisiwe, izinto zobumba, amamabula, njll.
I-Diamond bit ngokudayiswa komgodi wengilazi ihlanganisa ubuchwepheshe obuthuthukile, impumelelo yesayensi kanye nezobuchwepheshe nokusebenza. Kwenziwe ngobuciko, ukumelana nokugqokekayo okukhulu, kubukhali. Ngenqubo yokusebenza, inezinzuzo zokungabikho kokuwa komphetho, isivinini esikhulu futhi esibukhali futhi esisebenziseka kalula.
I-drill ekhethekile: ilungele ingilazi yokubhola, izinto zobumba, amathayili aphansi, njll. Ikhanda lokusika alinalutho futhi lenziwe ngoswidi. Kukhona isikhala odongeni lwekhanda lokusika ukwenza lula ukukhishwa kwama-chip chips. Kufanelekile ukubhola izimbobo ezinkulu zobubanzi.
Qaphela: ngaphambi kokusetshenziswa, qiniseka ukuthi zonke izikulufo zomkhiqizo zilungisiwe. Okokuqala ukuhlola ngomshini wesandla kagesi ukubona ukuthi i-blade ilungiswe kahle yini, bese uvula imbobo ukugwema ukusebenza okungafanele.
Langaphambilini 42 Bi-Metal Hole isaha yokhuni lwensimbi, How saw, Gypsum Board Plastic Iron Plate Hole Saw, Metal Wood drill, matel drill
Olandelayo: Granite hole saw, sintered marble hole saw, stone hole saw, diamond alloy cutter head, hole saw, crab marill, drill concrete